सरकार भन्दा माथि पार्टी : स्थापित पछि सोडारि बर्खास्त, अब पालो कस्को आउँदैं ?
सरकार भन्दा माथि पार्टी : स्थापित पछि सोडारि बर्खास्त, अब पालो कस्को आउँदैं ? - Nepal Talk
कार्तिक २८ गते, २०७५ मा प्रकाशित
काठमाडौं । मंगलबार सुदुरपश्चिम प्रदेश राष्ट्रिय मिडियामा चर्चाको विषय बन्यो । विषय थियो– सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी बर्खास्त भएको खबर ।
मन्त्री बर्खास्त हुने खबर आएपछि ‘सामान्य गाडी दुर्घटनामा किन निकाल्नु परेको होला ?’ भन्ने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा देखियो । तर, नयाँ मन्त्रीले सपथ लिएको एकैछिन पछि साँझ नयाँ खबरले सबै तरङ्गित बने ।
यो खबर फेरी बर्खास्त परेका मन्त्री सोडारीकै बारेमा थियो । अपरान्ह ढिलो गरि बसेको नेकपाको प्रदेश नेतृत्वको बैठकले सोडारीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कार्वाही गरेको थियो । साधारण सदस्य नै नरहने गरी कार्वाही गरेपछि भने यस अघिका स्वरहरु मत्थर भएका थिए ।
“पक्कै केही छ, त्यत्तिकै कार्वाही गरिएको रहेनछ ।’ नयाँ प्रतिक्रियाहरुको सार थियो । यो पक्कै केही चाहिँ सोडारीको पदीय आचरणसँग जोडिएको विषय थियो । नेकपा सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार, उनी माथि नैतिक आचरणसँगै जोडिएर उजुरी परेपछि पार्टीले कडा निर्णय लिएको थियो ।
सोडारी चर्चामा आउनु अघि दशैं र तिहारको बीचमा स्थापित चर्चामा थिए । केशव स्थापित, प्रदेश नम्बर ३ का मन्त्री । उनलाई पनि बर्खास्त गरिएको थियो ।
यहाँ पनि नैतिक आचरणको प्रश्न नै जोडिएको थियो । मुख्यमन्त्रीसँग उनको गम्भीर असहमति सार्वजनिक भएको थियो । उनले मुख्यमन्त्रीलाई सिएआइएको एजेण्ट भनेर टिप्पणी गरेका थिए । मुख्यमन्त्री सिआइएका एजेण्ट हुन या होइनन त्यो यो चर्चाको विषय होइन तर स्थापित स्वयम्माथि भने एकजना महिलाले यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाएकी थिइन ।
यी दुई प्रसङ्ग र घटना सामान्य छैनन् । विधि र पद्दती अझै स्थापित भइनसकेपनि कम्युनिष्ट पार्टीमा विगतमा जस्तो ‘जे गरे नि हुन्छ, मेरो फलानो नेतासँग राम्रो सम्बन्ध छँदैछ’ भन्ने कुरा अब सह्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । सोडारीको घटनामा उनले स्पष्टिकरणको मौका समेत दिन नपाउने गरी कार्वाही भोगेका छन् । यसले पार्टीले आचरणको विषयलाई कति गम्भीररुपमा लिएको छ भन्ने कुरा देखाएको छ ।
दुबै घटनामा पार्टीले नै हस्तक्षेप गरेर निर्णय गरेको छ । सरकार भन्दा माथि पार्टी छ र पार्टीले आचरणविरोधी या जनविराधी काम गर्ने कसैलाई पनि छूट दिन्न भन्ने यी दुई घटनाले प्रमाणित गरेको छ।
यसले हजारौं स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीलाई समेत सोझै चेतावनी दिएको छ– तिमीहरु कम्युनिष्ट पार्टीबाट निर्वाचित भएका हौ, स्वतन्त्र होइनौं, पार्टी र जनताविपरित काम गरे कार्वाहीमा पर्न बेर लाग्दैन ।
र, यो कुरा संघीय मन्त्रीहरुका लागि पनि सत्य हो । यसले पार्टीले आवश्यक ठानेको खण्डमा र अझ नेतृत्वले त्यो अनुभूति गरेमा जुनसुकै बेला पनि पदीय आचरणविपरित काम गर्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सकिन्छ भन्ने चेतावनी समेत यो घटनाले दिएको छ ।
स्थापित र सोडारीपछि अब कसको पालो? भन्ने प्रश्न पनि यही कुरासँग जोडिएको छ । पार्टीको भूमिका शक्तिशाली हुने अवस्थासँगै पार्टी र जनताकोहित विपरित सामान्य कम्युनिष्ट नैतिकताविपरित आचरण गर्ने जो कोही पनि अबको तेश्रो या चौथो निशाना बन्न सक्ने देखिन्छ।
भविष्यमा तल्लो तहसम्म एकीकरण भएर पार्टी एउटा फर्ममा आइसकेपछि यही विधि र पद्दतीले सरकारको मोर्चामा रहेका सबैलाई नियन्त्रित र निर्देशित गर्ने आशा पनि यसले जगाएको छ ।